Man iyo Naag iyo Cunug - Erayga Word Foundation • Wax ka baro adiga
Buuggan aan caadiga ahayn, oo si fudud loo qoro, wuxuu furay vistas meelihii lagu dhex qarxiyey qarsoodi qarniyo badan. Halkan waxaad ku baran doontaa in tallaabada ugu horreysa ee ku aaddan dib-u-dhalashada ruuxi ahaaneed uu fahmo bani-aadmiga u soo jeeda meydka dhimashada dhalashada iyo dhimashada. Halkaa, sidoo kale, waxaad baran doontaa aqoonsiga dhabta ah ee adiga oo ah is-difaacida jidhka-iyo sida aad u jebin kartid sharaxaadda iyo dareenkaada dareenka adiga kugu saabsan tan iyo carruurnimada. Waxaad fahmi doontaa, iyada oo loo marayo iftiinka fikraddaada, maxaa yeelay ninku mugdiga ayuu ku jiraa asalkiisa iyo asalka ugu dambeeya. Bilowga nolosha cusub, koraya, miyir-qabka ah wuxuu bilaabaa inuu sameeyo isbeddel xagga maskaxda ah feker, dareen, iyo rabitaan. Waxyeellada ay dareemayaan, waxay si tartiib tartiib ah u aqoonsaneysaa jidhkeedii waxayna lumisaa taabashada aqoonsiga runta ah ee weligeed ah. Kiraystaha aan dhimaneyn, oo si been ah ugu qanacsanaa dhimashadiisa, ayaa inta badan seegaya fursaddiisa si uu u helo meel ku habboon ee Cosmos oo aan buuxin karin himiladiisa ugu dambeysa. Man iyo Naag iyo Cunug waxay muujinaysaa sida loo isticmaalo fursadda loogu talagalay iskood u-helidda!
Akhri Man iyo Naagta iyo Ilmaha
"Waxyaabahani maaha kuwo ku saleysan rajada fankuxa. Waxay ku caddaynayaan caddaynta anatomical, physiological, biological iyo cilmi nafsiga ee halkan ku qoran, kuwaas oo aad awoodi kartid, haddii aad dooneysid, baadho, tixgelisaa oo aad garsoorid; iyo, ka dibna samee waxa aad u malaynayso ugu fiican. " HW Isboortiga